Betsaka ny toeram-piompiana ondry any Aostralia, Nouvelle Zélande, Amerika, Angletera, Frantsa, Kanada ary firenena maro hafa. Mazava ho azy fa mamokatra zezika ondry be dia be izy io. Izy ireo dia akora tsara ampiasaina amin'ny famokarana zezika biolojika. Fa maninona Ny kalitaon'ny tain'ondry no voalohany amin'ny fiompiana. Ny fihinanan'ondry dia ny tsimparifary, ny ahitra, ny voninkazo ary ny ravina maintso, izay ampahany mifoka azota.
Fanadihadiana momba ny sakafo
Ny zezin'ondry vaovao dia misy 0,4%% an'ny phosforus ary 0,23% ny potasioma, fa ny atin'ny azota dia 0,66%. Ny fosigôra sy ny potasioma dia mitovy amin'ny zezika biby hafa. Ny atin'ny zavatra biolojika dia manodidina ny 30%, mihoatra lavitra ny zezika biby hafa. Ny atin'ny nitroka dia mihoatra ny avo roa heny amin'ny atin'ny omby. Noho izany, raha ampiharina amin'ny kotrana ondrilahy mitovy amin'ny tany, ny fahombiazan'ny zezika dia avo lavitra noho ny zezika biby hafa. Ny vokatry ny zezika dia haingana ary mety amin'ny akanjo ambony, fa aorian'izayfermentation efa lo na granulation, raha tsy izany dia mora ny mandoro zana-ketsa.
Biby mamelona ny ondry fa tsy misotro rano matetika, ka maina sy tsara ny zezin'ondry. Ny habetsaky ny diky dia kely ihany koa. Ny zezin'ondry, toy ny zezika mafana, dia iray amin'ny zezika biby eo anelanelan'ny zezika sy tain'omby. Ny zezin'ondry dia misy otrikaina manankarena. Sady mora no zaraina ho otrikaina mahomby azo tsentsina, nefa koa misy otrikaina sarotra lo. Noho izany, ny zezika zezika zezika dia fitambaran'ny zezika malaky miasa sy mihetsika ambany, mety amin'ny fanaovana tany isan-karazany. Zezaky ny ondry amin'nyfermentation biolojika bakteria manangona fermentation, ary aorian'ny famotehana ny mololo, dia mikorontana ny bakteria sarotra biolojika, ary avy eo amin'ny fermentation aerobic, anaerobic ho lasa zezika organika mahomby.
Ny atin'ny zavatra biolojika amin'ny fakon'ondry dia 24% - 27%, ny azota azota dia 0,7% - 0,8%, ny votoatin'ny phosforus dia 0,45% - 0,6%, ny vatan'ny potasioma dia 0,3% - 0,6%, ny atin'ny zavatra biolojika amin'ny ondry 5%, atin'ny nitroka 1,3% ka hatramin'ny 1,4%, fosforôla kely dia kely, potasioma dia manan-karena be, hatramin'ny 2,1% ka hatramin'ny 2,3%.
Ny fizotran'ny zezika sy ny famafazana zezika:
1. Afangaroy ny zezika sy vovoka mololo. Ny habetsaky ny vovo-mololo dia miankina amin'ny atin'ny hamando an'ny ondry. Ny composting / fermentation ankapobeny dia mitaky hamandoana 45%.
2. Manampia bakteria sarotra biolojika 3 kg amin'ny zezika 1 taonina na zezika ondry vaovao 1,5 taonina. Aorian'ny fanalefahana ny bakteria amin'ny tahan'ny 1: 300 dia azonao atao tsara ny manondraka ireo antontam-bokin'ny zezika. Ampio katsaka katsaka, mololo katsaka, ahitra maina sns.
3. Hatao fitaovana tsara mpamono zezika manaitra ireo akora biolojika. Ny fampifangaroana dia tsy maintsy atao fanamiana, tsy miala amin'ny sakana.
4. Rehefa avy afangaro ny akora rehetra dia azonao atao ny manangona antontam-bokatra zezika. Ny sakany dia 2.0-3.0 m, haavon'ny 1.5-2.0 m. Raha ny halavany dia mihoatra ny 5 m no tsara kokoa. Rehefa mihoatra ny 55 the ny mari-pana dia azonao ampiasainamilina fanodinana windrow compost hampiodina azy.
Mariho: misy lafin-javatra sasany izay mifandraika amin'ny anao fanaovana zezika zezika ram, toy ny mari-pana, ny tahan'ny C / N, ny sandan'ny pH, ny oxygen ary ny fanamarinana, sns.
5. Ny fiompiana dia hiakatra 3 andro ny mari-pana, 5 tsy misy fofona, 9 andro malalaka, 12 andro manitra, 15 andro lasa lo.
a. Amin'ny andro fahatelo dia miakatra hatramin'ny 60 ℃ - 80 ℃ ny hafanan'ny antontan'ahitra, nahafaty an'i E. coli, atody ary aretina hafa momba ny zavamaniry ary bibikely bibikely.
b. Amin'ny andro fahadimy, esorina ny fofon'ny zezika.
d. Amin'ny andro fahasivy, manjary malemy sy maina ny zezika, rakotra hyphae fotsy.
d. Amin'ny andro faharoa ambin'ny folo voalohany dia mamokatra tsiro divay izy io;
e. Amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo dia mihamatotra ny zezin'ondry.
Rehefa manao composting zezika ondrika efa simba ianao dia azonao atao ny mivarotra izany na mampihatra azy eo amin'ny zaridainanao, ny fambolena, ny tanimbolinao, sns. famokarana zezika biolojika lalina.
Famokarana andian'ondry ny zezika
Aorian'ny composting dia alefa ao anaty ilay akora zezika zezika crusher material semi-wet manorotoro. Ary avy eo ampio singa hafa amin'ny composting (azota madio, pentoxide phosforus, potasioma klôro, amôniôma klôro, sns.) Hahatratra ny fenitra mahavelona ilaina, ary avy eo afangaro ireo fitaovana. Ampiasaogranulator zezika organika karazana vaovao hametahana ireo akora ho sombiny. Maina sy ampangatsiahina ny sombiny. Ampiasaomilina fitaratra hanao kilasy granula manara-penitra sy tsy mendrika. Ny vokatra mendrika dia azo afangaro mivantana amin'nymilina fanangonana mandeha ho azy ary ny granula tsy mahay dia haverina amin'ny crusher ho an'ny granulation indray.
Ny fizotry ny famokarana zezika organika zezika manontolo dia azo zaraina ho fonosana composting- crushing- mixing- granulate- drying- cool-- screening-.
Misy karazana tsipika famokarana zezika biolojika (manomboka amin'ny kely ka hatramin'ny lehibe) ho an'ny safidinao.
Fampiharana zezika voajanahary
1. Mamaky ny zezika organika ny zezika miadana, noho izany dia mety amin'ny zezika ifotony. Misy fiatraikany amin'ny vokatra izany. Tsara kokoa raha atambatra amin'ny zezika biolojika mafana. Raha ampiharina amin'ny tany fasika sy miraikitra loatra, dia afaka manatsara ny fahavokarana izy io, nefa manatsara ny asan'ny anzima amin'ny tany.
2. Ny zezika biolojika dia misy otrikaina maro karazana takiana hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra fambolena, hitazomana ny sakafo ilaina amin'ny sakafo.
3. Ny zezika biolojika dia tombony ho an'ny metabolisma amin'ny tany, fanatsarana ny fiasa biolojika, ny rafitra ary ny otrikaina.
4. Manatsara ny fanoherana ny haintany, ny fanoherana ny hatsiaka, ny famongorana ny tany ary ny fanoherana ny sira ary ny fanoherana ny aretina.